China DCME Ntughari uzo nile na ndi na enye ahia | Yunke
DCME Ntughari uzo nile
DCME bu ohuru ohuru nke uzo eji eche nche nke oma site na iji otutu ihe na aru oru, tinyere ASIC chipset raara onwe ya nye. Site na arụmọrụ dị elu na ike nhazi data dị ike, DCME na-arụ ọrụ site na ntinye ọsọ ọsọ ọsọ na ọnụ ọgụgụ nke ụlọ ọrụ nke njikọta ọhụrụ ma e jiri ya tụnyere firewall ọdịnala na routerband. DCME na - agbakwunye routerband, firewall, switch, VPN, njikwa na njikwa, nchekwa netwọkụ, njikwa ikuku na mfe ...
DCME bu ohuru ohuru nke uzo eji eche nche nke oma site na iji otutu ihe na aru oru, tinyere ASIC chipset raara onwe ya nye. Site na arụmọrụ dị elu na ike nhazi data dị ike, DCME na-arụ ọrụ site na ntinye ọsọ ọsọ ọsọ na ọnụ ọgụgụ nke ụlọ ọrụ nke njikọta ọhụrụ ma e jiri ya tụnyere firewall ọdịnala na routerband. DCME na - ejikọ routerband, firewall, switch, VPN, njikwa na njikwa, nchekwa netwọkụ, njikwa ikuku na nhazi dị mfe. Ọ dị mma maka obere ụlọ ọrụ na obere ụlọ ọrụ, ụlọ akwụkwọ, gọọmentị, ụlọ ahịa ndị nwere agbụ, kọfị ịntanetị buru ibu, ndị ọrụ na netwọkụ ndị ọzọ dị mgbagwoju anya.
Ike arụmọrụ n'okpuru elu ngwaike ije
DCME multi-core Security gateway na-eji ọtụtụ ndị isi na-arụ ọrụ, ASIC raara ọsọ ọsọ na-agbanwe engine na-eme ka ngwaike ngwaike niile na-agba ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ Ethernet ije. Imewe arụmọrụ a dị elu na-eme ka igwe amụrụ site na arụmọrụ arụmọrụ dị elu ma na-enye mmesi obi ike maka nchọpụta okporo ụzọ dị omimi na arụmọrụ siri ike nke nchekwa na nchekwa, firewall / VPN, IPv6, na ọrụ ngwanrọ ndị ọzọ dị elu.
Njikwa njikwa na njikwa omume ziri ezi
DCME na-enye atumatu njikwa akara ọfụma dabere na ngwa, adreesị IP, ndị debanyere aha, usoro ogbako, wdg, ma tọọ oke, opekempe, bandwidth ejiri na uplink na downlink. Enwere ike ịchọta ihe karịrị 200 usoro site na DCME iji tọọ nkwa bandwidth, njikwa bandwidth dabere na usoro akọwapụtara. Site na njedebe oge NAT ziri ezi, iyi egwu ọnụ ọgụgụ dị elu nke ọtụtụ usoro nbudata-ngwaọrụ na mwakpo nje kpatara.
Ọrụ firewall bara ọgaranya
DCME nwere ikike mgbochi ọgụ dị ike. Site na ọnụ ọgụgụ zuru ezu na nyocha ziri ezi na ngwugwu dị iche iche dịka ARP, IP, ICMP, TCP, UDP, na ụdị ngwugwu ndị ọzọ, enwere ike ịchọta ma gbochie mwakpo gụnyere SYN Iju Mmiri, DDoS, Mwakpo ngwugwu IP, mwakpo nyocha IP, wdg. Enwere ike ịnye ozi mkpu iji mee ka njikwa netwọkụ gị bụrụ nke nwere ntụkwasị obi.Bụsie ike na teknụzụ nchọpụta steeti dị elu, DCME na-enye usoro mgbochi ARP siri ike gụnyere IP + MAC njikọta, teknụzụ nyocha ARP, ntụkwasị obi ARP-mmụta, nzacha ARP. Enwere ike ịme IP / MAC na mgbochi mgbochi ARP usoro n'etiti ndị ahịa na ngwaọrụ na akpaghị aka.
A ukwuu ike ohere njikwa
Enwere ike iji ọnụ ụzọ nchekwa DCME dị ka onye njikwa nnweta iji melite netwọdụ ikuku na ngwaọrụ DCN AP. Dabere na teknụzụ njikwa ụyọkọ smart management, DCME nwere ike nyochaa uru RF na ọnọdụ nke AP ọ bụla ma dozie ike mgbaama na ọwa nke AP ọ bụla na-akpaghị aka dịka ọnụọgụ onye ọrụ ma ọ bụ iwu njikwa njikwa. N'otu oge ahụ, ọ nwere ike belata nnyonye anya nke akara ikuku iji ghọta nguzo nkwụsi ike na nkwụsi ike nke netwọkụ ikuku ma nye azịza zuru oke maka etiti / obere netwọkụ ikuku na ngalaba nke nnukwu ụlọ ọrụ.
Oru oma na mfe management na mmezi
Ọnụ ụzọ nchekwa DCME na-ewebata njikwa njikwa ihe osise zuru oke. Naanị usoro atọ ka achọrọ iji jikọọ DCME na netwọkụ na ọkachamara nhazi.
Dị iche iche nlekota jikoro, gụnyere arụmọrụ nlekota oru, ọdịda egwu, virus / ọgụ ịdọ aka ná ntị, wdg, na ọnụ ọgụgụ na ogo ọmụma dabere na bandwit na nnọkọ na-akwado ka management na mmezi mfe.
2G DDR nke atọ
10/100 / 1000M Isi-T
SFP / RJ45 ngwakọta
Njikwa ọdụ ụgbọ mmiri
1 RS-232 (RJ-45) njikwa, 2 USB2.0 ọdụ ụgbọ mmiri
Ọnọdụ ike / sistemụ / ọdụ ụgbọ mmiri
Na-arụ ọrụ 0 ℃ -40 ℃
Nchekwa -20 ℃ -65 ℃
Na-arụ ọrụ 10% -85% Na-abụghị condensing
Nchekwa 5% -95% Na-abụghị condensing
Ndị ọrụ na-atụ aro ka ha rụọ ọrụ
Na-atụ aro Bandwidth Mbupụ
Oge ọhụụ kwa nkeji
Max concurrent nnọkọ
Max IPSec ọwa
Max L2TP nweta ndị ọrụ
Max SSL Okwey ohere ọrụ
Max ọrụ nyocha ndị ọrụ
Ihe njikwa Wi-Fi
APP ndị a na-enwe ike ịnweta
Oke kachasị APs
Ntugharị / NAT / Bridge
Ntanetị PPPoE ahịa, PPPoE chap / pap / atọ ọ bụla Nyocha ụzọ, PPPoE ahịa reconnection
DHCP Server, Onye ahịa, agba anọ
Ihe nkesa DNS, proxy
Ntugharị na-arụ ọrụ, usoro ntanetị na mkpa, RIP
PBR (dabere na adreesị isi, ọdụ ụgbọ mmiri, adreesị ebe, usoro, na usoro ndị ọzọ), na-akwado IP ọzọ ma ọ bụ interface
Ẹkot multi-ụzọ ibu adịzi, na bandwit ibu na-akpaghị aka ịgbanwe nkezi nke ọ bụla ụzọ, iji nweta ibu adịzi dabere na akara.
Multilink nkwado ndabere na mpaghara ọrụ, nhazi oge njikọ steeti nchọpụta, na akpaka ịmafe na azụ n'etiti njikọ
Isi Iyi NAT Static / Dynamic
1: 1 NAT1: N NATN: N NATIdozi Ibu Ọrụ
Nnyocha dị omimi
Njikwa na ọnụego-oke na ngwa P2P na-ewu ewu gụnyere BT, eMule, eDonkey
Njikwa na ọnụego-etinyere na ngwa IM ndị a ma ama gụnyere Yahoo, GTalk, wdg.
URL nzacha, nyocha QQ
Njikwa bandwidth dabeere na IP
Njikwa bandwidth nke ngwa
Igba dabeere na bandwit njikwa
Bandwit nkwa, bandwit ndoputa, mgbanwe bandwit oke
2 ọkwa nke njikwa bandwit (IP na njikwa bandwidth ngwa, ọdụ ụgbọ mmiri)
Usoro mgbochi ARP (arp mmụta, arp n'efu, arp nchedo)
IP-MAC njikọ, ntuziaka na akpaka
DoS, DDoS ọgụ nchebe
Nchedo mmiri: Iju mmiri ICMP, idei mmiri UDP, iju mmiri SYN
DNS gbara ajụjụ iju mmiri nchedo: DNS gbara ajụjụ & DNS recursive ajụjụ iju mmiri ọgụ nchedo
Nchedo ngwugwu ezighi ezi
IP anomaly nchọpụta, TCP anomaly nchọpụta
Adreesị IP na-enyocha mwakpo mgbochi, nchedo ọdụ ụgbọ mmiri
Denjụ Nchedo Ọrụ: Ping nke Ọnwụ, Anya mmiri, Mpepu IP, nhọrọ IP, Smurf ma ọ bụ Fraggle, Land, ICMP nnukwu ngwugwu
dabere na interface, isi iyi IP, ebe IP, na ngwa (ọhụụ ọhụrụ kwa nkeji na ọnụ ọgụgụ nke otu oge)
Oge ịchịkwa oge
Njikwa Wi-Fi, nhazi, nyochaa
Ihe onyonyo abuo
Firmware kwalite site na WEB na TFTP
Nhazi nkwado ma weghachite
HTTPS HTTP TELNET SSH
Ọkachamara nhazi weebụ
Njikwa ihe dabere na adreesị IP, usoro ogbugba, oge, na interface
Abanye na nyochaa ọnụ ọgụgụ
Nlekota oru na onu ogugu banyere onu ahia
Nlekota na onu ogugu banyere ahia IP
Nlekota oru na onu ogugu na onodu onu ogugu nke dabeere na adreesị IP
Nlekota na onu ogugu na bandwidth na onu ogugu nke dabere na ngwa
Nlekota oru na onu ogugu banyere onu agha
Nlekota na onu ogugu na IP, ngwa, na agha dabere na Nche ngalaba
Ihe omume log / traffic log / nhazi log / mkpu log / nche log
USB log ndabere
Akwa ntụkwasị obi Nkwado njikọ ibu adịzi, njikọ ndabere
Otutu usoro nchoputa odida ihe
Ahụkarị Ngwa 1: Export Gateway, na-ejikọ ọrụ nke rawụta brọdband, firewall, njikwa okporo ụzọ na njikwa, nchekwa netwọkụ.
Ihe eji eme ihe 2: Wulite VPN Njikọ n'etiti isi ụlọ ọrụ na alaka
DCME-320-L DCME-320-L ọnụ ụzọ ámá jikọtara ọnụ, ya na atụmatụ nke brọdband, firewall, switch, VPN, njikwa okporo ụzọ na njikwa, nchekwa netwọkụ, njikwa ikuku, yana ọdụ ụgbọ mmiri nke 8 * 10/100 / 1000M Base-T, 1 * Console, 2 * USB2.0. ndabara na 2 nkeji AP ikike, na-akwado ịchịkwa max.32 APs, na-atụ aro a kacha nke 300 ọrụ.
DCME-320 (R2) DCME-320 (R2) ọnụ ọnụ ụzọ ámá, na atụmatụ nke brọdband rawụta, firewall, mgba ọkụ, VPN, njikwa okporo ụzọ na njikwa, nchekwa netwọkụ, njikwa ikuku, yana ọdụ ụgbọ mmiri nke 8 * 10/100 / 1000M Base-T, 2 * 1000M Combo , 1 * njikwa, 2 * USB2.0. ndabara na 4 nkeji AP ikike, na-akwado ịchịkwa max.64 APs, na-atụ aro a kacha nke 500 ọrụ.
DCME-520 -L DCME-520-L na - ejikọ ọnụ ụzọ ámá, yana atụmatụ nke rawụta brọdband, firewall, switch, VPN, njikwa na njikwa, nchekwa netwọkụ, njikwa ikuku, yana ọdụ ụgbọ mmiri nke 6 * 10/100 / 1000M Base-T, 1 * Console, 2 * USB2.0. ndabara na 6 nkeji AP ikike, nkwado ịchịkwa max.256 APs, na-atụ aro a kacha nke 1000-1200 ọrụ.
DCME-520 DCME-520 na - ejikọ ọnụ ụzọ, yana atụmatụ nke rawụta brọdband, firewall, switch, VPN, njikwa na njikwa, nchekwa netwọkụ, njikwa ikuku, yana ọdụ ụgbọ mmiri nke 9 * 10/100 / 1000M Base-T, 4 * 1000M Combo, 1 * Njikwa, 2 * USB2.0. ndabara na 12 nkeji AP ikike, nkwado ịchịkwa max.512 APs, na-atụ aro a kacha nke 2000 ọrụ.
DCME-720 DCME-720 na - ejikọ ọnụ ụzọ, yana atụmatụ nke rawụta brọdband, firewall, switch, VPN, njikwa na njikwa, nchekwa netwọkụ, njikwa ikuku, yana ọdụ ụgbọ mmiri nke 17 * 10/100 / 1000M Base-T, 4 * 1000M Combo, 1 * Njikwa, 2 * USB2.0. Tụọ aro nke ndị ọrụ 5000.
DCME-AC-10 AP ikike igbalite ikike ikike (ikike maka 10 AP)